Hebei Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. ji obi ụtọ na-anabata ndị ahịa Rwandan ka ha gaa
Hebei Lihua Pharmaceutical na-arụsi ọrụ ike na-aza iwu mba "Belt na Road" ma gbasie ike gbasaa ahịa mba ofesi Africa. N'ụtụtụ nke Eprel 22, onye ahịa Rwandan kabahizi bịara na ụlọ ọrụ anyị ileta ma kwurịta ihe jikọrọ ọnụ. Onye isi njikwa nke ...
Usoro Mgbochi Ọrịa na-efe Ọrịa Africa, Chinese Academy of Agricultural Sciences (2018-2022)
site ha na 19-06-21
2019 Nian 5 Yue 24- Ri, Chinese Academy of Agricultural Sciences research briefing kwuputara "mmemme nyocha ọkụ na nchịkwa nke Africa". Mgbe ntiwapụ nke oria swine nke Africa, Chinese Academy of Agricultural Sciences t ...
Ihe ngosi 125th China Import na Export Fair, Hebei Lihua Pharmaceutical Industry Co., Ltd. jiri azụ zuru ezu laghachi!
site ha na 19-05-07
2019 Nian 5 Yue 1 ụbọchị -5 nke, 125 nke China Import na Export Fair ẹkenịmde ke Guangzhou Pazhou ngosi Center. Dị ka ihe omume azụmahịa nke mba ụwa, mpaghara mbupụ nke ngosi a gụnyere textiles na uwe, akpa, ọdịbendị na egwuregwu, nri, ọgwụ na ọgwụ ...